LA YAAB: Libaax dhedig ah oo nuujiya caanihiisa Harimacad - Latest News Updates
Harimacadka Yar ma badali karo haraggiisa wax badan ka muuqaal duwan kan Libaaxa, laakiin haddana dhinaca kale marka aad eegto Libaaxa Dhediga ah arintan wax culus ah kuma qabo, madaama uu raali ku yahay in ay sidaa ku wada joogaan.
Waa sheeko la Yaab leh iyo sawir qurux badan oo laga qaaday Libaax Dhedig ah oo xannaaneyneysa Harimacad Yar oo waliba la arkayay isaga oo Jaqaya ama [Nuugaya] Libaaxa Dhediga ah.
Arintan cajiibka ah waxaa idhiisa ku arkay Joop Van Der Linde, oo marti ku ahaa Hotel Ndutu Safari Lodge oo ku yaal deegaanka Ngorongoro. Goobtu waa Serengeti; hooyada feejigan [Liibaaxa dhediga ah waa shan jir laguna magacaabo Nosikitok.
Goosha iyo sadex yar yar oo ay dhashay waxaa ku xiran qalabka lagula socdo dhaqdhaqaaqa ee GPS kaasi oo uu ku ilaaliyo, ururka Kope Lion oo ah urur samafal oo daryeela duurjoogta.
Dr Luke Hunter, oo ah madaxa iyo hogaamiyaha ururka Panthera, oo ah urur caalami ah oo daryeela Liibaxyada duurjoogta ah isla markaan taageera ururka Kop Lion wuxuu u sheegay BBC in dhacddadan tahay mid dhab ahaantii aan horay loo arag.
“Ma aha wax la arkay ama horay u dhacay oo dhexmaray Liibaaxyo, waynu ogayn in ay dhacdo jiritaanka in goosha Liibaaxu ay koriso qaar aannay dhalin, laakiin tani waa mid aan horey loo arag”
“Inta badan Liibaax dhediga ah, caadiyan aragti bay ku dili lahayd haramcad yar haddii ay hesho, iyadoo u arkaysa dilaa kale oo tartan ugula jira cunto” ayuu yiri Dr Hunter.
Inta badan sheekooyinka dhifta iyo naadirka ah ee ka dhaca dunida ayaa u muuqda kuwo u baahan in cashar laga qaato ah in marka kasta is dilka iyo weerarka uusan aheyn mid furan.